Muxuu Mourinho uu ka dhahay qaab ciyaareydkii xalay ee Lindelof ?
Friday, June 22nd, 2018 - 15:46:06
Wednesday September 13, 2017 - 14:11:25 in Wararka by Kubad Bile
Jose Mourinho ayaa doonaaya Victor Lindelof inuu Manchester United oo u ciyaaro booska dhaxe siduu u horumaroyo daafacyadda kooxda.
Lindelof ayaa kusoo bilowday kulankiisii ugu horeeyay ee United muddi bil ah. kooxda Old Trafford ayaa waxaa ay 3:0 ugu awood sheegatay kooxd Basel. Lakiin Mourinho ayaa shegay Lindelof inuu kursiga keydka uu kusoo laaban doono kulalnka axada oo ay United la ciyaari donnto Everton.
Tababaraha United ayaa sidoo kale waxa uu intaasi uu ku sii daray Lindelof inuu kusoo bilaaban doono kulanka arbacada ee Carapa Cup ee ay la leeyihiin kooxda heerka labaad ee Burton Albion si uu ula qabsado qaab ciyaareedka kubada cagta Ingariiska.
"Haddii Victor uu u ciyaaro Premier League sidduu u ciyaaray.majirto wax dhibbaato ah.miyuu sameyn karaa qalad si uu ula qabsado Premier League? Waxaan qabaa inuu sameyn karo" Ayuu Mou u sheegay saxaafada.
"Laakiin maya. dabbecadda Premier League wey isbadali kartaa. waxaan qabaa inaa u baahannahay daafacyo ciyaari kara. waxaa u baahannahay daafacya imaan karaan khadka dhaxe. kubadda keeni keena. baasa. maxaa yeelay waxa uu noqonaa daafac dhab ah. waxaan la kulmeynaa kooxo badan oo dheella shan daafac dhexe. oo lagu daray labo. saddax horleh isla markaasina habdhaqan daafac leh"
"Victor iyo dhammaan daafacyadeena. waa mid kamid ah kuwa tayo badan leh marka booska khadka dhaxe usoo weerar tago. sidaasi daraadeed waxa uu doonayaa inuu ciyaaro khadka dhaxe. waxa uu doonayaa inuu ciyaaro Premier League."
"Waxaa haysanaa afar daafac. waan ku faraxsanahay afartooda.Smalling sidoo kale waxa uu u ciyaaeay si aad u adag. sidaasi daraadeed waa uu fiicnaa"